PowerPoint Gadzira Chishandiso. PowerPoint Kudzorera Software. Gadzirisa PPTX Mafaira.
DataNumen PowerPoint Recovery ndiro yakanakisisa PowerPoint chigadziro chekugadzirisa munyika. Inogona kugadzirisa yakaora PowerPoint PPTX mafaera uye dzoreredza yakawanda yedata rako sezvinobvira, nokudaro uchideredza kurasikirwa mufaira uori.
Sei DataNumen PowerPoint Recovery?
Zvinhu Zvikuru mu DataNumen PowerPoint Recovery v1.9
Tsigira Microsoft PowerPoint 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 uye PowerPoint yeHofisi 365 pptx mafaera.
Tsigiro yekudzosera maslide masters, marongero, masiraidhi, zvinyorwa zvemanotsi, zvinyorwa, masters ekupa uye madingindira.
Tsigiro yekudzora ese marudzi enhau, kusanganisira mifananidzo, 3D mamodheru, mavhidhiyo uye maodhiyo.
Kutsigira kugadzirisa PowerPoint mafaira pane zvakashata midhiya, senge floppy disks, Zip disks, CDROMs, nezvimwe.
Tsigiro yekugadzirisa batch ye PowerPoint mafaira.
Tsigiro kuti uwane uye sarudza iyo PowerPoint mafaira kuti agadziriswe pakombuta yemuno.
Tsigira kusangana neWindows Explorer, kuti ugone kugadzirisa PowerPoint faira ine mamiriro ezvinhu eWindows Explorer nyore.
Tsigira yekuraira mutsara paramita.
kushandisa DataNumen PowerPoint Recovery Kudzoreredza Zvakashatiswa PPTX Mafaira
Kana zvako PowerPoint Mafaira ePPTX akaora kana kukuvara uye haugone kuvhura zvakajairika, unogona kushandisa DataNumen PowerPoint Recovery kuti utarise mafaera ePPTX uye uwanezve yakawanda data kubva kwavari sezvinobvira.
Ongorora: Usati wadzosera mafaera ePPTX akaora kana akaremara ne DataNumen PowerPoint Recovery, ndapota vhara chero mamwe mashandiro anogona kugadzirisa mafaira ePPTX.
Sarudza iyo yakaipa kana yakakuvadzwa faira rePTT kuti riitwe
Iwe unogona kuisa iyo PPTX filename zvakananga kana tinya iyo
bhatani kuti uwane iyo PPTX faira kuti riwanikwe pakombuta yemuno.
By default, DataNumen PowerPoint Recovery ichachengeta iyo yakadzorerwa PPTX faira mufaira nyowani inonzi xxxx_fixed.PPTX, uko xxxx ndiro zita renyaya PPTX faira. Semuenzaniso, kune sosi PPTX faira Yakakuvara.PPTX, iro zita rekutanga refaira rakadzorerwa rinenge rakakuvadzwa_fixed.PPTX. Kana iwe uchida kushandisa rimwe zita, ndokumbira usarudze kana kuriseta saizvozvo:
Sarudza Fixed File Name
Unogona kuisa zita rakadzoserwa refaira zvakananga kana tinya iro
bhatani rekutarisa uye sarudza iyo yakadzoserwa faira.
bhatani, uye DataNumen PowerPoint Recovery kuda start kuongorora uye kudzoreredza iyo sosi PPTX faira.
Mushure mekudzoreredza maitiro, kana iyo sosi PPTX faira ikawanikwazve zvinobudirira, iwe uchaona iro meseji bhokisi rakadai.
Iye zvino unogona kuvhura iyo yakadzoserwa PPTX faira neMicrosoft PowerPoint.
DataNumen PowerPoint Recovery 1.4 inoburitswa muna Zvita 14, 2020
DataNumen PowerPoint Recovery 1.2 inoburitswa munaNovember 3rd, 2020
DataNumen PowerPoint Recovery 1.1 inoburitswa muna Gumiguru 29, 2019
Dzorerazve batch yekudzosa injini.
Tsigiro yekuchengetedza batch yekudzosa danda.
DataNumen PowerPoint Recovery 1.0 inoburitswa muna Ndira 18, 2019
Tsigira Microsoft PowerPoint 2007 kusvika 2019 uye PowerPoint yeHofisi 365 pptx mafaera.